Pool fenzi girazi Vagadziri & vanotengesa - China Pool fenzi girazi Fekitori
10mm Yakadzikama girazi fenzi yekushambira pabhangi
Yakabatirwa Girazi redziva fenzi
Edge: Yakakwenenzverwa zvakakwana uye isina gwapa micheto yemahara.
Kona: Kudzivirirwa Radiasi makona kubvisa njodzi yekuchengetedza kwemakona akapinza.Girazi rese rine 2mm-5mm yekuchengetedza nharaunda makona.
Girazi regirazi gobvu iro rinowanzo kuwanikwa pamusika kubva 6mm kusvika 12mm. Ukobvu hwegirazi hwakakosha kwazvo.
Aya magirazi anouya pre-akaboorwa neanodiwa maburi e hinji uye kukiya. Tinogona zvakare kupa magedhi akagadzirwa kune yakasarudzika saizi kana zvichidikanwa.
Kana uchinge wakarembera gedhi kubva kune chimwe chidimbu chegirazi iwe unozoda kuti iyi ive hinge pani. Iyo hinge girazi jira inouya iine ina maburi eiyo magedhi mahinji akavharirwa kune chaiyo saizi munzvimbo dzakakodzera nzvimbo. Tinogona zvakare kupa tsika saizi hinge mapaneru kana zvichidikanwa.
Yakazara isina kugadzirwa girazi fenzi haina chero zvimwe zvigadzirwa zvakakomberedza girazi. Simbi mabhaudhi anowanzo shandiswa pakuisirwa kwayo.Tinopa 8mm yakadzikama girazi pani, 10mm yakadzikama girazi mapaneru, 12mm yakadzikama girazi mapaneru, 15mm yakatsamwa girazi mapaneru, pamwe neyakafanana yakanyoroveswa laminated girazi uye Hasha Yakanyorova Girazi.
12mm Yakadzikama girazi fenzi yekushambira balcony
Isu tinopa 12mm (½ inch) gobvu rakadzikama girazi nemakushe akapetwa uye kutenderera kona yekuchengetedza.
12mm gobvu isina chigadziko yakatsamwa girazi Panel
12mm Yakadzikama girazi Panel ine maburi eingi
12mmTempered girazi Musuwo nemakomba echipfuva uye hinji